कस्तो श्रीमान चाहन्छन् केटीहरु ? | Kendrabindu Nepal Online News
6388317 377883 3087871 2922563
कस्तो श्रीमान चाहन्छन् केटीहरु ?
२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १३:११
विवाहको सिजन सुरु भइसकेको छ । केटा होस वा केटी बिवाहभन्दा अघि उनीहरुको जिन्दगी अलग हुन्छ र बिवाहपछि पुरै बदलिन्छ । बिहेसँगै बदलिन्छ उनीहरुको सपना र इच्छा । खासगरी केटीहरुलाई आफ्नो इच्छाहरु दबाउनुपर्ने हुन्छ । केटीहरुले बिहेलाई लिएर धेरै सपनाहरु बुनेका हुन्छन् । धेरै प्रकारको योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । केटीहरु आफ्नो हुनेवाला श्रीमान कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् ?
बिवाह भन्दा पहिला केटीहरुले यही सोच्छन् कि उसको हुनेवाला जीवनसाथी उसलाई एकदमै प्रेम गर्ने होस् । यसको साथै केयरिङ गर्ने, इमान्दार र रोमान्टिक स्वाभावको होस् । केटा होस् या केटी आफ्नो पार्टनर सबैभन्दा बेस्ट होस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । केटीहरु सहयोग गर्ने केटा मन पराउँछन् ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो केटीहरु आफ्नो सम्बन्ध समझदारी र इमान्दारीसँग निभाउँछन् । उनको हुनेवाला जीवनसाथी उसलाई उति नै सम्मान गरोस जती उ चाहन्छ । केटीहरुले यो कुरा नभने पनि उनीहरु मनै देखि चाहन्छन् । सिर्फ, उसलाई मात्र होइन हरेक व्यक्तिलाई सम्मानको नजरले हेरोस् ।
केही गरेर देखाउने इच्छा
हरेक केटीहरु आफ्नो आमा बुवाप्रति मनैबाट प्रेम र सम्मान गर्छन् । आफ्नो आमा बुवाहरुको लागि केहि गर्न चाहन्छन् । उनी चाहन्छिन् कि बिवाहभन्दा अघि आफ्नो आमा बुवाको सम्मानको अगाडि बढाउने पुरा कोशिस गर्छिन् । त्यसको लागि हरेक असम्भव कुरा सम्भव बनाउने कोशिस गर्छिन् ।
यसमा कुनै शंका छैन् । केटीहरु सानो सानो कुरालाई लिएर डराउँछन् । तर अहिलेको समयमा केटीहरुको साहरामा जिउन चाहदैँनन् । जिन्दगीको हरेक फैसला आफ््ने तरिकाले गर्छन् । आफ्नो लागि स्टेन्ड लिनबाट कहिल्यै पछि हट्दैनन् । आफ्नो जीवनको लिएर केटीहरु बढि नै संवेदनशिल हुन्छन् त्यसैले आफ्नो फैसला आफै गर्न चाहन्छन् । हरेक केटी आफ्नो साथ साथै अरुको लागि पनि स्टेन्ड लिन सक्न र आत्मर्भिर बन्न चाहन्छन् ।
किनमेल गर्न त सबै केटीहरुको सौख नै हो । किनमेल गर्न मन पराउँछन् । बिवाह अघि केटीहरु धेरै किनमेल गर्न चाहन्छन् । आप्mनो लागि मात्रै होईन उनीहरु आफ्नो पार्टनरको लागि पनि किनमेल गर्न चाहन्छन् ।
girls, Life Partner, love, जीवनसाथी, विवाह
Prevब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपतिद्वारा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण
श्रीमानलाई खुशी बनाउन के गर्ने के नगर्ने ? (१८ टिप्स)Next
प्रियंका र आयुष्मान : इन्गेजमेन्टदेखि विवाहसम्मका १५ सेलिब्रेसन (भिडियोसहित)
मोटरसाइकल दाइजो दिन नसकेपछि विवाह नै रोकियो !
हवाईजहाजसँग विवाह !
श्रीराज खरेलका ३ गजल